सिन्धु काँग्रेसमा पुरानै अनुहार – खुल्लापाना
१२ मंसिर, चौतारा ।
२ वटा प्रतिनिधिसभा भएको नेपाली कांग्रेस सिन्धुपाल्चोकको क्षेत्रीय अधिवेशनबाट दुवै क्षेत्रमा पुरानै अनुहार दोहारिएका छन् । यस अघि पनि आ—आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको नेतृत्व गरिसकेका निवर्तमान अध्यक्षहरु नै यस पटकको अधिवेशनमा समेत निर्वाचित भएका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसको हिजो शनिबार भएको क्षेत्रीय निर्वाचनको नतिजा आज विहान मात्रै आएको हो । नतिजा अनुसार प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. १ को सभापतीमा बालकृष्ण बस्नेत र २ को सभापतिमा आइतमान तामाङ निर्वाचित भएका छन् ।
बस्ने काँग्रेसको तेह्रौं अधिवेशनमा समेत साविक क्षेत्र नं. १ को सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए भने तामाङ साविक क्षेत्र नं. ३ को सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । साविक क्षेत्र नं. २ मा भने टंक कार्की सभापति भएका थिए । देश संघिय संरचनामा गएपछि बनेको २ क्षेत्रमध्ये १ मा बस्नेतले र २ मा तामाङले नै नेतृत्व गरिरहेका थिए । कार्की भने यो पटक महाधिवेशन प्रतिनिधि पदमा उम्मेदवार भएका छन् । मतदान सकिएपनि सो पदको नतिजा भने आएको छैन ।
शनिबार भएको निर्वाचनबाट बस्नेतले तीर्थ लामालाई पराजित गरेका थिए भने तामाङले कृष्ण बहादुर तामाङलाई पराजित गरेका थिए । अबेरगरी आएको मतपरिणाममा दुवै उम्मेद्वारको प्यानल नै विजयी भएको हो । बस्नेतको प्यानलबाट सचिवमा कृष्ण प्रसाद आचार्य र सञ्चवीर तामाङ, सह सचिवमा अजय तामाङ र सुजन पौडेल विजयी भएका छन् ।
सोही क्षेत्रको सदस्यहरुमा भने निमा शेर्पा, रामशरण बस्नेत, नेत्रबहादुर सापकोटा, पदमलाल श्रेष्ठ, रामशरण भण्डारी, स्वस्थानी कार्की थापा, हिरा बहादुर भण्डारी, देवदोर्जे तामाङ र मानकाजी गुरुङ निर्वाचित भएका छन् । बस्नेत पार्टीभित्र देउवा समुहका हुन् ।
उता क्षेत्र नम्बर २ को सभापतिमा तामाङसहित सचिवमा केशव श्रेष्ठ र विष्णु घोरासैनी, सहसचिवमा प्रेमसिंह तामाङ र दीपकुमार तामाङ र सदस्यहरुमा शुशिला लामिछाने, बुद्धि बहादुर तामाङ, शम्भुप्रसाद कोइराला, साइला तामाङ र तामा माझी निर्वाचित भएका छन् । तामाङ भने पौडेल समुहका नेता हुन् ।
Tags: आइतमान तामाङकाँग्रेस अधिवेशननेपाली काँग्रेसबालकृष्ण बस्नेत
माओवादी जुगलको नेतृत्वमा रेशम स्याङ्गबो